छोटा कपडा लगाउने महिलाहरुलाई का’रवाहीको तयारी ! – Khabaarpati
October 21, 2020 goodmamLeaveaComment on छोटा कपडा लगाउने महिलाहरुलाई का’रवाहीको तयारी !
एजेन्सी । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाले एउटा यस्तो कडा कानून ल्याउँदैछ जसमा छोटा कपडा लगाउने महिलाहरुलाई कारवाही गरिनेछ । १८ वर्षकी मोलिका ट्यानले जब पहिलोपटक सरकारले उक्त कानूनको मस्यौदा तयारी गरिरहेको बारेमा सुनिन् तब उनी यति चिन्तित भइन् कि त्यसविरुद्धमा एक अनलाइन अपिल नै सुरु गरिन् । जसका कारण सरकारिय स्तरबाटै छाेटा कपडा बिरूद्ध यस्तो कानुन ल्याउन लागेकाे हाे ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **